Labo dukaan oo khudaar ah ayaa laga dhisi doonaa gobolka Moscow - Joornaalka "Nidaamka Baradhada"
Labo dukaan oo khudaar ah ayaa laga dhisi doonaa gobolka Moscow
в News, Aruurinta keydinta, Wararka gobolka
Harooyinka u dhow Moscow, waxaa laga hirgelinayaa mashruuc lagu dhisayo laba bakhaar oo cusub oo lagu keydiyo khudaarta.
Heshiisyo u dhexeeya dawladda gobolka Moscow iyo shirkadda beeraha Ozery JSC ee hubinta hirgelinta mashruuca maalgashiga ayaa la saxeexay 22-kii Abriil.
"Kordhinta wax soo saarka khudaarta iyo baradhada waa mid ka mid ah caqabadaha ugu muhiimsan ee xaqiijinta sugnaanta cuntada. Dhismaha laba dhisme ayaa kor u qaadi doona awoodda kaydinta khudaarta shirkaddu 2 oo tan. Qiyaasta qiyaasta maalgelinta abuurista dhismaha waxay noqon doontaa ilaa 000 milyan oo rubi, "ayuu yiri Georgy Filimonov, Guddoomiye Ku-xigeenka Dowladda ee Gobolka Moscow.
Mashruuca ayaa la qorsheeyay in la dhameeyo rubuci 3aad ee 2023.
Ilaa hadda, beertu waxay abuurtay shabakado tas-hiilaad kayd ah oo kuu ogolaanaya inaad iibiso alaabta laga bilaabo wakhtiga jiifka iyo ilaa May sanadka soo socda. Koritaanka noocyada hore ee baradhada iyo khudaarta ayaa u oggolaan doona iibinta alaabta beerta muddada haray.
Jihada wax soo saarka ee baradhada iyo khudaarta waxaa loo qoondeeyey block gaar ah ee beeraha, taageero soo saarayaasha beeraha ku hawlan beerista baradho iyo khudaar kale waxaa lagu fuliyaa gudahood qaab-dhismeedka Barnaamijka Gobolka ee Horumarinta Beeraha iyo Xeerarka Badeecooyinka Beeraha, Agabka Ceyriinka iyo Suuqyada Cuntada.
Tags: JSC "Ozery"gobolka Moscow
Baradhadu hab ay ula dagaallanto coronavirus
FARMAAJO ASTRAKHAN AYAA DIB U DHIGTAY GURINTA BADHAHA